Dingana 5 hanafainganana ny Ubuntu | Ubunlog
Dingana 5 hanafainganana ny Ubuntu
Raha manana solosaina iray volana isika dia mety tsy mila mankany amin'ity torolàlana ity na izany aza raha manana solosaina efa antitra kely isika ary tsikaritray fa somary kamo ny Ubuntu, angamba tsara kokoa ny manatona an'ity torolàlana kely ity hanafainganana ny Ubuntu amin'ny dingana dimy fotsiny.
ireo Dingana 5 hanafainganana ny Ubuntu dia dingana tsotra be ary ny tsotra azon'ny tsirairay atao, vakio fotsiny tsara dia araho izy ireo. Tonga dia eo ny valiny ary hihazakazaka ny Ubuntu na dia tsy hahatratra ny hafainganam-pandeha hanova ny fitaovana ho an'ny solosaina iray manontolo aza izy io.
1 Dingana voalohany hanafainganana ny Ubuntu: Applications Startup
2 Dingana faha-2 hanafainganana ny Ubuntu: ampandehano ireo mpamily karatra sary.
3 Dingana faha-3 hanafainganana ny Ubuntu: Hanova ny tontolon'ny birao.
4 Dingana faha-4 hanafainganana ny Ubuntu: Ovao ny Swappiness
5 Dingana faha-5 hanafainganana ny Ubuntu: Diovy ireo rakitra tsy ilaina
Dingana voalohany hanafainganana ny Ubuntu: Applications Startup
Voalohany aloha dia tsy maintsy mankany Dash isika ary avy eo manoratra «Fampiharana fanombohana«. Rehefa avy manindry ny varavarankely dia hisokatra amin'ny a lisitry ny rindranasa sy serivisy manomboka amin'ny Ubuntu rehefa mandrehitra ny solosaina isika. Ity lisitra ity dia mety ho fohy sy maivana fa raha miadana ny PC dia mety ho lava be ilay lisitra. Mila esorina fotsiny ny serivisy izay heverinay fa tsy ilaina toy ny programa fanontana, kapila matevina virtoaly na karazana serivisy hafa mitovy amin'izany.
Dingana faha-2 hanafainganana ny Ubuntu: ampandehano ireo mpamily karatra sary.
Ny Unity sy ny birao hafa dia samy mampiasa effets grapikety maro hanintonana ny mpampiasa. Indraindray raha tsy mampiasa mpamily sahaza ny Ubuntu. ny rafitra dia mety ho lasa miadana amin'ny fitantanana sary. Noho io antony io, ny safidy tsara indrindra dia ny fampiasana mpamily anao manokana izay manatsara ny fitantanana sary. Raha mampiasa karatra sary Intel isika dia tsy misy olana satria hampiasa ireo mpamily mifanitsy aminy i Ubuntu, raha manana karatra AMD Ati isika dia mila mandeha Fikirana -> Rindrambaiko sy fanavaozana -> mpamily fanampiny ary safidio ny safidy manokana. Raha manana karatra Nvidia isika dia tsy maintsy averintsika ny fandidiana teo aloha fa safidio ny mpamily manana isa ambony indrindra izay ho mpamily havaozina indrindra.
Dingana faha-3 hanafainganana ny Ubuntu: Hanova ny tontolon'ny birao.
Ny dingana fahatelo dia tsotra kokoa noho ny teo aloha: ovao ny biraonao. Ny firaisam-po dia tsy safidy mavesatra fa misy birao maivana kokoa toa an'i Xfce, LxQT, fahazavana ara-panahy na mampiasa manager windows hafa fotsiny toa ny OpenBox na Fluxbox. Na izany na tsy izany, ho lehibe ny fanovana ary hanafaingana kely ny Ubuntu.
Dingana faha-4 hanafainganana ny Ubuntu: Ovao ny Swappiness
Ny swappiness dia ny dingan'ny fitadidiana izay mitantana ny fizarazaranay Swap, raha manana lanja avo lenta isika, maro ireo rakitra sy fizotra maro no ho tonga amin'ity fahatsiarovana ity, izay mazàna miadana kokoa noho ny fahatsiarovana ram. Raha tazonina ho farafaharatsiny farafaharatsiny izy, Ubuntu dia hanokana fizotrany bebe kokoa amin'ny ram rafitra haingana kokoa. Avy eo noho izany dia hanova ny sandan'ny swap isika. Manokatra terminal izahay ary manoratra izao manaraka izao:
Dingana faha-5 hanafainganana ny Ubuntu: Diovy ireo rakitra tsy ilaina
Ubuntu koa mamorona rakitra vonjimaika na rakitra junk avy amin'ny fametrahana tsy nahomby, fametrahana taloha, sns ... Izany koa dia mahatonga an'i Ubuntu ho somary miadana. Mba hanamboarana azy, ny safidy tsara indrindra dia ny fampiasana Ubuntu Tweak, fitaovana lehibe iray izay ankoatra ny fanaingoana ny Ubuntu, dia hanadio ny rafi-drakitra fako sy ny fisie vonjimaika.
Ataovy ao an-tsaina fa ireo dingana ireo dia fototra fa tsy hanolo ny fitaovana vaovao na ny fitomboan'ny fahatsiarovana ondrilahy na zavatra mitovy amin'izany. Tokony ho raisina izany satria ireo dingana ireo dia hanafainganana ny Ubuntu saingy tsy hanao fahagagana izy ireo, etsy andaniny misy ny safidy hanafainganana ny Ubuntu fa ny fampiharana hafa kosa mampiadana azy, indrindra ny Mozilla Firefox sy Libreoffice, ho an'ireo rindranasa ireo. manoratra izahay lahatsoratra manokana izany dia milaza amintsika ny fomba hanafainganana azy ireo. Mariho raha izany no raharahao. Fantatro fa maro ny fomba fanamboarana hanafainganana ny Ubuntu na bebe kokoa aza Inona avy ireo fomba ampiasainao hanafainganana azy?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Tutorials » Dingana 5 hanafainganana ny Ubuntu
fabian valencia munoz dia hoy izy:
Salama aho nanandrana ny dingana hampihenana ny fifanakalozana fa mijanona ho toy izany ihany izy amin'ny 60 amin'ny fanampiana azafady azafady
Mamaly an'i fabian valencia muñoz
hd dia hoy izy:
Izaho dia mizaha ny ubuntu 16.04, mandeha tsara izy, ny zavatra ratsy dia ny fanombohana, maharitra 3 minitra, nanomboka ny windows tao anatin'ny 10 segondra, ny masiniko dia hp miaraka amina processeur intel i3, 250gb sdd disk 6gb memory, ny application startup dia famantarana-aplication Gnome-rindrambaiko Agent-of -SSH-fanalahidy izay esoriko
Mamaly an'i hd
cann357 dia hoy izy:
Raha vantany vao ao anaty rakitra ianao dia mila mitady ireo safidy
DefaultTimeoutStartSec ary DefaultTimeoutStopSec. Miankina amin'ny
fizarana, azo atao ny maneho hevitra amin'ireto safidy ireto (ireo manana #
eo aloha), ka raha sendra mahita azy ireo toy izao dia mazava ho azy fa ilaina izany
mampihetsi-po azy ireo. Ny sanda default matetika dia 90 segondra
(90s), izay azo ovaina amin'ny habetsaky ny fotoana ampiasain'ny mpampiasa
Diniho mety. Raha ny amiko dia 5 ihany no napetrako tamin'ity indray mitoraka ity
Salama, fantatro fa tsy izany no atao hoe consultation, fa tiako ho fantatra hoe ahoana no hamaritana hoe firy GB no azoko ampitomboina ny fitadidiako ram. Manana xubuntu 14 napetraka aho.
Efa ho iray volana no nampiasako azy ity ary mendri-piderana, tsy azoko an-tsaina hoe aiza no ahafahako manitatra ilay ondrilahy amin'ny laptop-ko
Fomba hafa hanodinana autocad ao Ubuntu
Te hitondra radio FM any amin'ny telefaona BQ ireo mpandrindra